IMF-ta oo Riixeysa Soo daabacista lacag cusub oo Soomaaliya loosoo sameeyo
Iyadoo dhawaan dowladda Somaliya ay shaacisay inay wado qorshe ay ku soo daabaceyso lacag cusub oo Shilin Soomaali ah, ayaa markii ugu horeysay Sanduuqa caalamiga ah ee lacagta aduunka IMF waxa ay sheegeen in Soomaaliya ay ka caawinayaan daabacaada lacagtaasi cusub.
Samba Thiam oo ah Madaxa IMF ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in lacagaha Somaliya iminka laga isticmaalo ay yihiin kuwa duugoobay oo u baahan in lacag cusub Soomaaliya loo soo daabaco.
Waxa ay intaasi raacisay 98% lacagta Somaliya laga isticmaalo inay tahay mid been abuur ah (Faalso) oo lagu daabacay meelo ka mid ah Soomaaliya, halka 2% ay tahay mida saxda ah ee Shilinka Soomaaliga ah, taasi oo duugoowday.
Lacagtaan ayaa lagu wadaa in ay waxbadan ay ka badasho hanaanka lagu horumarinaayo dhaqaalaha Soomaaliya.
Qiimeyn uu horay u sameeyay Bangiga Adduunka lagana sameeyay dalalka aadka u faqiirsan oo ay Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa Soomaaliya waxaa ay ka gashay kaalinta Shanaad, waxaana qiimeyntaasi lagu sheegay in qof kaste oo joogga Soomaaliya uu sanadkii isticmaalo $435 doollar cel celis.
Soomaaliya ayaa doonaysa in ay daabacdo lacag cusub oo qiimo u leh Bulshada Soomaaliyeed , madam lacagtii ay noqotay mid uu shiiqiyay dollarka.
Gudoomiyaha Bangiga dhere ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa horaantii Bishaan sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo qorsho sanadkaan gudihiisa lagu soo daabacaayo lacag cusub.
Gudoomiyaha ayaa xilligaasi sheegay in dhaqaalaha ku baxaayaa uu dhan yahay 60 Milyan oo Dollar.